पारशको संगत फेरि अर्को युवतिसँग, को हुन् ? (भिडियो – News543Online
September 28, 2021 adminLeaveaComment on पारशको संगत फेरि अर्को युवतिसँग, को हुन् ? (भिडियो
पुर्वयुवराज पारश शाहको चर्चा कहिले पनि घट्दैन । ‘बदनाम हुनु तर गुमनाम नहुनु’ भनेजस्तै पारश सधैँ चर्चामा रहिरहन्छन् । उनी आफूखुशी चर्चामा आउन भने खोजेका होइनन् । उनी नेपालका यस्ता सेलिब्रेटि हुन् जसको अघिपछि सधैँ मिडियो हुने गर्दछ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग बाँचिरहदा पनि उनी मिडियामा देखिरहन्छन् । ‘माया गर वा नगर, तर मलाई इन्कार गर्न सक्दैनौँ’ भनेजस्तै पारशका गतिविधि रुचाउने धेरै छन् । ‘कमेडि च्याम्पियन’ मा भरतमणि पौडेलले पारशको क्यारिकेचर गरेकै भरमा २० लाख रुपैँया र कार कमाए । यसको मतलब पारशलाई रुचाउनेको जमात ठूलो छ ।
अहिले भने तीनै पारश फेरि एक युवतिसँगको निकटताका कारण चर्चामा छन् । काठमाडौँको सडकमा मास्क लगाएर दुईजना हार्ले डेभिडसन बाईकमा हुइकिएको भिडियो अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेको छ । टिकटक देखि फेसबुकसम्म सोहि भिडियोको चर्चा छ । कसैले पारशलाई ‘सोनिका त होइन को हुन् ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् त कोहिले पारशको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न नउठाउन आग्रह गरेका छन् ।
पुर्वयुवराज शाहको पारिवारिक सम्बन्ध खासै सुमधुर छैन । पुर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहसँग उनी खासै देखिदैँनन् । पछिल्लो समय, पारशका आमा कोमल राज्यलक्ष्मी शाहको जन्मदिनमा पारश र हिमानीसँगै देखिएका थिए । यसपछि भने पारश नागार्जुनमा बस्दा हिमानी थाइल्याण्ड गएको समाचारहरु बाहिरीएको थियो ।
युवतिहरुसँग किन नजिकिन्छन् पारश: पारश केहि समयअघि चर्चित भिजे, मोडल तथा व्यवसायी सोनिका रोकायासँगको निकटताका कारण चर्चामा आए । पारशले जे गरेपनि उनको मिडियामा चर्चा हुने गर्दछ । सोनिकासँगको सम्बन्ध झनै मिडियाहरुलाई राम्रो कन्टेन्ट फेला परेको थियो । त्यसपछि पनि पोखरामा एक युवतिसँग उनको भिडियोहरु देखियो । आखिर किन पारश युवतिहरुसँग नजिकिन्छन् त ? पारश युवतिहरुसँग नजिकिएकि युवतिहरु पारशसँग नजिकिए त्यो फरक पाटो होला ।
तर, पारशको हाउभाउ अनुसार जस्ले उनलाई बुझ्न खोज्छ ऊसँग पारश नजिकिन्छन् । वास्तवमै पनि सधैजसो पारशको नकारात्मक पाटोलाई मात्र मिडियामा प्राथमिकता दिइन्छ । उनका पनि केहि इच्छा होलान्, देश र जनता प्रति माया होला । तर, ती विषयहरुलाई कहिले पनि मिडियाले स्थान दिएको छैन ।
पारशका वैचारिक दृष्टिकोण निकै सुन्दर छन् । सोनिकाले आफ्नो भ्लग मार्फत पारशका विचारहरु दर्शकसामु पेश गरेकि थिइन् । उक्त समयमा पारशले हामी पश्चिमा संस्कृतिप्रति बढि झुकाव राखेको बताएका थिए । गुरुको कुल गुरुकुलमा नगएर हामी ईशुको कुला स्कुलमा गइरहेको भिडियो बाहिरीएको थियो । साथै, उनले आफु विरुद्ध पुरा मिडिया देखि कुटिनितिज्ञ हात धोएर लागिपरेको पनि बताएका थिए । हुन पनि हो, उनको सधै नराम्रो पाटोमात्र उजागर गरिदैँ आइएको थियो । उनीसँग निकट हुने धेरै छन् । तर, जब उनी आफ्नो कुरा स्वार्थ नभई सुन्ने मान्छे भेट्छन् तब नजिक भइहाल्छन् । सोनिका देखि अन्य पात्रसँगको निकटता पनि त्यहि एउटा कारण हो ।
जेठ ३ गते साेमबारको राशीफल, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य
कोरियामा सधैका लागि अस्ताए अर्का एक नेपाली,,,हार्दिक श्रद्धान्जली